कम्प्यूटराइज्ड सेक्विन क्विल्टि emb एम्ब्रोइडरी मशीन_डong्गगुआन चिसि Mach मेशीनरी कं, लिमिटेड।
डोgu्ग्वान ची शिंग मशीनरी कं, लिमिटेड स्थापना गरी १ 1970 s० को बीचमा छिटो विकास भएको थियो। अधिक बजार काट्न र अन्वेषण गर्न, डोgu्ग्वान ची शिंग मशीनरी कं, लि। विश्व फैक्टरी- डgu्गगुआन गुआंग्डोंग प्रान्तमा एक कारखाना सेट गर्नुहोस्। यसले १२,००० वर्ग मिटर कभर गर्दछ। पहिलो र केवल एक quilting मेशिन निर्माता त्यस समयमा मुख्यभूमि चीन मा। यसको उन्नत टेक्नोलोजीको साथ, अद्वितीय डिजाइन, र अब चिसि the Quilting उद्योग मा एक अग्रणी स्थिति प्राप्त गरेको थियो। वर्तमानमा कम्पनीसँग विशाल ठाडो मिलिंग मेशीन, क्षैतिज मिलिंग मेशिन, खराद इत्यादि छन्। साथै हामीले उन्नत सीएनसी संख्यात्मक नियन्त्रण मिलिंग मेशिन आयात गरेका छौं। यस बीच, हामीसँग आरएमपी; डी meters मिटर संख्यात्मक नियन्त्रण मिलिंग मेशीन छ; यसले हाम्रो उत्पादको गुणस्तर सुधार गर्‍यो र मेशिनहरूको मोडेल बढायो। उत्पादनहरूमा in 64इन्च, in inininch ११० इंच र १२8 इन्च डिजिटल कन्टिल्ट मेसिन समावेश छ। In 64 इन्च, in in इंच मेकानिकल मोडल क्वालिटिंग मशीन। मानकीकृत प्रबन्धन, प्रशस्त टेक्नोलोजी शक्ति, उन्नत उत्पादन टेक्नोलोजीको साथ कम्पनीले आफ्नो बिक्री नेटवर्क सम्पूर्ण देशभर अफ्रिका, दक्षिण पूर्व देशहरू विस्तार गर्दछ, लगभग सारा विश्वभरि कार्य गर्दछ। २००० देखि विदेशमा हाम्रा प्रयोगकर्ताहरू बढ्दै छन्। राम्रो अदालतमा हुँदा कम्पनी कहिले पनि सन्तुष्ट हुँदैन। अधिक सन्तोषजनक उत्पादनहरू प्राप्त गर्न कम्पनी सधैं उत्तम गुण, सबै भन्दा राम्रो मूल्य, र उत्तम सेवाको लागि छिटो गतिमा अधिक र अधिक प्रयोगकर्ताहरू जित्न प्रयास गरिरहन्छ। कम्पनीले राम्रो प्राप्त गर्नका लागि आफैलाई सुधार राख्नेछ र चीनको धेरै केन्द्रीय शहरहरूमा अफिस बेच्न पछि सेट गर्नेछ। जस्तै बेइजि,, जब, ह्या Z्ग झोउ, शिशी, शेंग्या and र नान्ताong्ग। स्थिर विस्तार हुने निर्यात व्यापारको साथ, हाम्रा उत्पादनहरू अमेरिका, युरोप, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण-पूर्वी एशियामा निर्यात हुन्छन्।
काट्ने मेसिनको साथ उच्च गति सिलाई मेशीन
CSHX213 उच्च गति कम्प्यूटरीकृत सेक्विन क्विल्टि emb इम्ब्रोइडरी मेशीन
CSHX234B डिजिटल नियन्त्रण Quilting र कढ़ाई मशीन
CSHX219 उच्च गति minitype Quilting र कढ़ाई मशीन
CSHX233 बहु हेड Quilting कढ़ाई मशीन
CS110 / CS128 कम्प्यूटरीकृत औद्योगिक गद्दा पैनल सिलाई मेशिन
डिजिटल नियन्त्रण Quilting र कढ़ाई मेशिन निर्माताहरू नवीन टेक्नोलोजी CNC प्रेसर खुट्टा
भर्खरै विकसित डिजिटल कन्टलि qu र कढ़ाई मेसिन प्रेसर खुट्टाले फेब्रिकको बिशेषता वा संस्करण बेल्टको आवश्यक्ता अनुसार सुई पट्टीमा प्रेसरको खुट्टा स्ट्रोक समायोजित गर्न सक्दछ, र प्रेसर खुट्टाको उच्च र तल्लो स्थिति सबै भन्दा कममा परिवर्तन गर्दछ। पोइन्ट, त्यसरी थिच्ने समय र शक्ति समायोजन गर्दा कढ़ाईको समयमा सामग्री हल्लाउनबाट रोक्नको लागि। कढ़ाई गुण अधिक स्थिर छ, र थ्रेड ब्रेकेज एकदम कम गरिएको छ।
2020-09-23 थप हेर्नुहोस्
डिजिटल नियन्त्रण रजाई गर्ने र कढ़ाई मेशीन उत्पादकहरू, कम्प्युटर गरिएको एम्ब्रोइडरी मेसिनको सीएनसी प्रेसर खुट्टा टेक्नोलोजीको विस्तृत विवरण।
प्रेसरको तल मृत केन्द्रको समायोजनको लागि, प्रत्येक चरणलाई स्थिति अनुसार परिवर्तन गर्न सकिन्छ। सीएनसी प्रेसर खुट्टाको डिजाइन विशेषता उत्पादनको गुणस्तर सुधार गर्नका लागि हो, र कढ़ाई उत्पादनको मानकीकरण बढी कुशल छ!
2020-09-25 थप हेर्नुहोस्
त्यहाँ एक प्रकारको एम्ब्रोइडरी मेशिन छ जुन चीनमा डिजिटल कन्ट्रोल क्विलिटिंग र एम्ब्रोइडरी मेशीन निर्माताहरू भनिन्छ
मर्मत कर्मीहरूले ध्यानपूर्वक जाँच गरे कि--पिन सिग्नल तारहरू बीच कुनै सर्ट सर्किट थिएन, र त्यहाँ केस मालाउने कुनै घटना थिएन। पछि, मैले अपरेटरलाई भनिरहेको सुने कि मेसिनले सँधै सियोको प्रयोग गर्‍यो, तर भर्खरै, अधिक र colorsहरू सहित अर्डरहरू परिवर्तन गर्दा, त्यहाँ बारम्बार झूटा अलार्महरू थिए। त्यसकारण, मर्मत गर्ने कर्मचारीहरूले सुई र अन्य सुई संकेतहरूको अगाडि र उल्टो प्रतिरोध मापन गरे, र पत्ता लगाए कि एउटा समूहले असामान्य प्रतिरोध गरेको थियो। सिद्धान्तमा, यसलाई उत्साहित गर्नु हुँदैन किनभने त्यहाँ डायोडहरू पृथक र समानान्तरमा जडित छन्। परीक्षणको लागि सबै मेशिन हेडहरू खोल्नुहोस्, र अन्तमा पत्ता लाग्यो कि त्यहाँ नं। Machine मेशिन हेडको सिग्नल लाइन छ जो झर्छ केवल सार्वजनिक खुट्टामा, त्यसैले जब मेशिन कम्पन कार्य गरिरहेको छ, कहिलेकाँही सम्पर्क हुँदैन। सम्पर्क, र अनियमित गलत अलार्महरू देखा पर्दछ।
2020-10-09 थप हेर्नुहोस्
उच्च उत्पादकता, Quilting र कढ़ाई एक ही समय मा कम्प्यूटरीकृत sequins Quilting कढ़ाई मेसिन विनिर्माण मा पूरा गर्न सकिन्छ
कम्प्युटराइज्ड सेक्विन क्विल्टि emb मेसिनले कपडाको सम्पूर्ण रोल प्रशोधन गर्न सक्दछ एक पटकमा, कुनै काटि ,्ग, विभाजन, असेंबली र प्रसंस्कृत कपडाको पृथक बिना अग्रिम। कपडाको पूरै रोल लोड भएपछि, मेशिनले स्वचालित रूपमा फेब्रिकलाई सुई कार्य क्षेत्रमा पठाउँदछ। कच्चा माल पछाडिबाट जान्छ र समाप्त उत्पाद अगाडिबाट आउँछ, अन्तहीन लुपमा काम गर्दै। विशेष रूपमा, यसले ग्राहकहरूको माग आवश्यकताहरू पूरा गर्दछ जो प्रोसेस्ड कपडाहरूको बीचमा कुनै जोड्ने र खाली नभएको।
2020-08-21 थप हेर्नुहोस्
१.7 मिटर कपडाले कपडालाई क्रोइडर मेशिन (डबल चौडाइ) भन्छ: कसरी क्विल्टि embroidery मेसिन सफा गर्ने?
फिड कुकुर सफा गर्दै: सुई प्लेट र फिड कुकुरको बीचको स्क्रू हटाउनुहोस्, कपडा लिन्ट र धूलो हटाउनुहोस्, र ईन्जिन तेलको थोरै मात्रा थप्नुहोस्।
2021-03-30 थप हेर्नुहोस्
१.7 मिटर कपडाहरू क्विल्टिंग इम्प्रोइडरी मेशिन (डबल चौडाइ) क्विलिंग इब्रुइडरी मेसिन र विद्युतीय उपकरणहरूको सिद्धान्त परिचय गर्नुहोस्!
प्लेट बनाउन पहिलो एम्ब्रोइडर CAD सफ्टवेयर प्रयोग गर्नुहोस्, र ढाँचा उत्पन्न पछि, क्रमशः क्रमशः कम्प्युटर डिस्क ड्राइभमा डिस्कहरू राख्ने डिस्कहरू राख्नुहोस्।
2021-04-07 थप हेर्नुहोस्
के तपाईं रोलिंग मेशिनको सबै अपरेटिंग सुरक्षा ज्ञानलाई थाहा छ?
इस्पात प्लेट रोलिंग मेशिन मुख्यतया रोलिंग मेशिनमा स्टिल स्ट्रिपको कोइलिंगको लागि प्रयोग गरिन्छ। यसको मुख्य विभागहरू पावर नियन्त्रण प्रणाली, विस्तार र संकुचन संयन्त्रबाट बनेको छन्, सामग्री प्राप्त गर्ने उपकरण र हाइड्रोलिक नियन्त्रण प्रणाली। रोलिंग मेशिनसँग साधारण संरचना, कम उत्पादन लागत, र आवश्यक रूपमा अस्थिर रोल-आकार फिल्म सामग्रीको अनविन्डि ofको फाइदाहरू छन्।
2021-03-08 थप हेर्नुहोस्
एचडी डिस्प्ले र नियन्त्रण समाधान कम्प्युटरराइज्ड सेक्विन को क्विल्टि emb इम्ब्रोइडरी मेसिनको लागि चीनमा
१ 1970 and० र १ 1980 s० को दशकमा, साधारण मानिसहरूले वाच, टेलिभिजन र सिलाई मेशिनलाई "तीन अत्यावश्यक टुक्राहरू" को रूपमा मान्थे। परम्परागत घरेलु सिलाई मेशिनहरू सबै क्रोधित थिए, र सिलाइ त्यस समयमा घरमा महिलाहरूको लागि सीप हुनु पर्छ। आजकल, कपडा शपिंग मल्लहरू र विभिन्न ई-कमर्स शपिंग प्लेटफर्महरू सबै मानिसहरूका दैनिक आवश्यकताहरू पूरा गर्दछन्। कपडाको लागि कपडा किन्ने परम्परा अब अवस्थित छैन। सिलाई मिसिन बिस्तारै परिवारबाट गायब भयो र कारखानाको विशेष उपकरण बन्यो। दक्षता र उत्पादकता सुधार गर्न कारखानाहरूले प्राय: दुई वा बढी प्रक्रियाहरू एउटै मेशिनमा मिलाउँछन्, धेरै उत्पादन वा कम्पुटरिज्ड सेक्विन बनाउँदछ, बृहत उत्पादनको लागि कढ़ाई मशीन।
2020-09-04 थप हेर्नुहोस्